डरलाग्दा ट्याक्सी चालक दाई!! - Blogs of Sagar Prasai
डरलाग्दा ट्याक्सी चालक दाई!!
जाउलाखेलको चिडियाखाना अगाडीको ट्याक्सी स्ट्यान्डमा एउटा मात्रै ट्याक्सी थियो। मलाई गौशाला आउनुपर्ने थियो। ट्याक्सी तिर हेरेँ- ड्राईभरको हुलिया डरलाग्दो थियो। कपाल तालु, कानमा बडा मुन्द्रा, एकदमै कालो चश्मा, हातमा बेरेको रुद्राक्षको माला। ठ्याक्कै नेपाली टेलिफिल्महरूमा कहिले काँहि खेल्ने "दावा डन" जस्तै। मलाई उनको ट्याक्सीमा चढ्न मन लागेन। तर अरू ट्याक्सी नभएको र घर जान ढिलो भईसकेकाले म सँग अरू उपाय भएन।
उनको नजिकै गएँ र भने- दाई खाली हो?
"खाली हो सर!"-उनले अति नै नम्र स्वरमा भने।
म त छक्क परे। उनको स्वरुप र उनको स्वरमा आकाश जमिनको फरक थियो। उनको लवज सुनेपछि मेरो डर हरायो। घर आउनको लागी ट्याक्सी चढे।
ती ट्याक्सी चालक बहुत मजाका मान्छे रहेछन्। कुरा सुरू गर्दै उनले भने-" मेरो ट्याक्सीमा खासै मान्छे नै चढ्दैन सर। कहिले काही खाली हिडिरहेको बेला, बाटोमा बुढा मान्छेहरूलाई अनि अपाङ्ग मान्छेहरूलाई लगिदिन्छु भन्छु, चढ्नै मान्दैन!"
मैले भने-"तपाईलाई देखेर डराउने होला। म त अघि डराएँ।"
उनले हाँस्दै भने-"होला सर। मलाई फेरी पहिला देखीको सोख हो यो। एक्सरसाईज गर्ने, ड्रेस अप गर्ने, अहिले ५५ बर्षको भए।"
मलाई छक्क लाग्यो। उनी मुश्किलले ४० बर्षका जस्ता देखिन्थे।
मैले कुरा मोड्दै सोधे-"भुईचालो आउँदा, कता हुनुहुन्थ्यो त दाई?"
उनले भने-"सर म त तिनजना विदेशी केटी लिएर भक्तपुर घुम्न गा'को थिए। ल हामी भित्र घुम्छौँ तिमी यहि पर्ख भनेर तिनीहरू भित्र गए। म चाहि गाडीमा पल्टिए। एकैछिनमा सबै मान्छे भाग भन्दै कुदे। म त केहि बुझ्दै नबुझी भाग्न खोजे। के को हिड्न सक्नु। खुट्टै चलेन।"
मैले चाख मान्दै सोधे-"अनि?"
उनले भने-"अनि एउटा सिंघको मुर्तिमा दर्हो गरी समातेर उभ्भिएँ। मुर्ति त यस्तो हल्लियो कि कुरै छोड्नु। म त छकक परे। के भा'को यस्तो भनेर। आज बिहानै जाँड पनि खाको छैन। पछि पो मान्छेले भुईचालो आयो भने। अनि पो मलाई थाहा भाको।"
मैले हाँस्दै सोधे- त्यसपछि के भयो त?
उनले भने- "हेर्नु सर मान्छेको मन कस्तो पापी। सबै तिर घर लडेर, मान्छे रोएर बिजोग थियो। मलाई चाहि त्यो बिदेशी हरू पनि कता गरायो, मर्यो कि बाँच्यो, अब मेरो पैसा गयो भन्ने लाग्यो।"
उनले म तिर हेरे। मैले कहि नभनि सुनिरहे।
उनले नै अगाडी भने-" फेरी आफै सोचे- थुक्क मेरो मन। बिचरा अर्काको देशमा घुम्न आका तिनीहरू कहाँ फसे होला भन्ने लाग्यो। अनि खोज्न हिडे।"
मलाई उनको कुरा एकदमै मनपर्यो। सोधे-"खोज्नै जानुभयो?"
उनले भने- "हो त। खोज्दै गएँ। काँहि छैन। अलि अगाडी गएपछि फेरी भुईचालो आयो। कृष्ण मन्दिर मेरै छेउमा बर्लङ्ग लड्यो। एकछिन त्यहि बसे। अलि साम्य भएपछि फेरी अगाडी गए। अलि पर पुग्दा त तिनीहरू तिनै जना अँगालो मारेर बसेका रहेछन्।"
मैले फेरी सोधे-"अनि के भयो त?"
उनले भने-"मैले उनीहरुको छेउमा पुगेर, यु ओके? भनेर सोधे। बिचराहरू त मलाई समातेर ग्वाँ ग्वाँ रोए। मलाई त कस्तो माया लाग्यो सर।"
मेरो मन पो भरिएर आयो भने-"हामी खोज्दै ट्याक्सी चालक आयो भनेर होला दाई खुशीले रोका।"
उनले भने-"खोई के होला। अनि मैले- गो होम भनेर सोधे? अनि हामी चारै जना बिस्तारै बाहिर निस्कियौ। कता कता फेरी हल्लाउथ्यो, एकछिन बस्थ्यौ। उनीहरूको होटल पुग्न तीन घन्टा लाग्यो।"
मैले जिस्काउदै सोधे- "अनि पैसा दिए त दाई?"
उनले हाँस्दै भने-"दिए सर।"
यी दाई सँग यस्ता रमाईला कुरा गर्दै मेरो घर आईपुग्यो। बिदा माग्नु अघी मोबाईल नम्बर मागे। मलाई थाहा थियो- फोन त गरिदैन होला। त्यहि पनि मागे। उनले नाम र नम्बर टिपाए। अनि हात हल्लाउँदै बिदा भए।
कोठा छिर्दै गर्दा- मेरी श्रिमतीले भनिन्-"कोहि मान्छे, कस्ता असल हुन्छन् है!"
मैले जवाफमा केहि भनिन। अघिका देख्दाका डरलाग्दा ट्याक्सी चालकलाई सम्झे र मुस्कुराएँ।